lundi, 04 janvier 2021 21:08
Pilo kely : Izay nandia ny oniversité dia tokony hanaja ny foto-pisainana mandrafitra ny oniversité
Filozofika aloha ny Oniversité fa tsy trano, rindrina, sy table banc na bourse.
Ny oniversité dia toerana handrafetana ny foto-pisainana sy fikarohana tsy misy fetra, ka manaja ny etika sy ny mahaolona, ny fahamarinana ary ny fanajana lalàna.
Toerana itoeran'ny fahalalahan-tsaina. Izay no ilazana azy hoe Univers. Ary izay no mahatonga ny toerana arovana tsy hidiran'ny mpitandro filaminana na hery famoretana.
Arovana izay fahalalana ara-tsaina tsy misy fetra izay. Izay no mampisy ny hoe Anjerimanontolo.
Foto-pisainana aloha izany ny Oniversité vao trano sy bourse.
Misy fiantsoana ireo sampana ao anatiny hoe "Faculté", izay midika hoe " Fahafaha-manao, fahaiza-manao".
Ny zavatra rehetra atao eny amin'ny Oniversité izany dia tokony hifanentana amin'izay toe-tsaina mifototra amin'ny fahatsarana sy fahamarinana ary fanarahan-dalàna sy fenitra izay avokoa.
Tra-tehak'ireo miaramila avy amin'ny Holafy faha 406 1/RM4 teo am-pandrobana sy fanolanana i Garabavy sy Dada, ny 03 janoary 2021 tokony ho tamin'ny 05 ora sy sasany maraina, tao amin'ny Fokontany Miadana, Kaominina Marovoay.
Dahalo rain-dahiny sy mpilalao ody izy ireto ka mbola tratra teny amin'izy ireo ny mohara sy ny basy vita tanana.
Hotanterahina etsy amin'ny efitrano malalaky ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana ny alakamisy 07 Janoary 2021 amin'ny 10 ora maraina ny lanonana ara-pitsarana hanaovana ny famoahana amin'ny fomba ofisialy ny voka-pifidianana Loholona.
Miisa 12, ka 2 isaky ny Faritany, ireo Loholona nofidiana ny 11 desambra 2020 ka nandraisan'ireo mpifidy vaventy niisa 12 465 anjara.
lundi, 04 janvier 2021 07:58
Soavinandriana Itasy : Oniversité inona no ajoro
Oniversité no amboarina amin'io, na ny panneau de chantier aza tsy misy lohany sy vodiny, aiza moa no hisy firenena androso amin-javatra goragora sy alasafay toa izao, na ny daty anombohana ny asa tsy misy, ny orinasa mpanara-maso ny asa tsy misy, ny mpamatsy vola, ny teti-bidin'ny asa moa dia efa natao nahazatra ny tsy fametahana azy.
Vao miainga ny cahier de charge dia efa zero, ka asa Oniversité inona no ajoro eto.